गर्भावस्थामा पायल्सः कारण र उपचार के हो ? - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
गर्भावस्थामा पायल्सः कारण र उपचार के हो ?
Posted by Chintan | २३ चैत्र २०७५, शनिबार २१:५४ |
गर्भावस्थामा उच्च रत्तचाप, मधुमेह भए के गर्ने ? गर्भावस्थामा पायल्स भए के गर्ने ? धेरैजसो गर्भवतीले झेल्ने प्रश्न हो यो ।
गर्भावस्था आफैमा एक जटिल शारीरिक अवस्था हो । यतिबेला गर्भवतीको शरीर यसैपनि संवेदनशिल हुन्छन् । उनीहरुको गर्भमा अर्को शरीर हुर्किरहेको हुन्छ । यसले गर्भवतीको शरीरमा अनेकन समस्या ल्याइरहेको हुन्छ ।
त्यसमाथि अन्य समस्या थपिए के गर्ने ?
खासगरी पायल्स ।
हुन त गर्भावस्थामा कब्जियत हुने संभावना अधिक हुन्छ । कब्जियतले पायल्स । यतिबेला महिलाको स्वास्थ्य फरक ढंगबाट गुजि्ररहेको हुन्छ । गर्भमा शिशुको विकासको कारण भइरहँदा महिलाको मासिक चक्र खण्डित हुन्छ । यही कारण कब्जियत हुन्छ । कब्जियत नै पायल्सको मूल कारण हो ।
यो समस्या विशेषगरी गर्भावस्थाको १७ औं र १८ औं सप्ताहममा हुन्छ ।
सुरुवाती दिनमा मल त्याग वा दिसा गर्न कठिनाई हुन्छ । मलद्वारको आसपासको भागमा दुखाई र चिलाउने समस्या हुन्छ । साथै दिसा गरेको बेला रगतको थोपा तप्किन थाल्छ । मलद्वारको आसपासमा मासुको स-सना दाना देखिन थाल्छ । कुनै कडा ठाउँमा बस्दा असजिलो महसुष हुन्छ ।
किन हुन्छ गर्भावस्थामा पयल्स ?
गर्भवतीको शरीरमा प्रवाहित भइरहेको रगतको मात्रा बढ्छ । र, प्रोजेस्टेरोन हर्मोनलाई हाइ लेभल ब्लड वेसलको भित्ता शिथिल बनाइदिन्छ । यसैले पायल्सको समस्या हुन्छ ।
गर्भावस्थामा पायल्सको समस्या हुनु आम हो । चाहे तपाईं गर्भवती हुनुअघि यस्तो समस्याबाट ग्रसित भएको होस् वा गर्भावस्थामा नै । कतिपय महिलाले प्रसुतीपछि यस समस्याको सामना गर्नुपर्ने पनि हुन्छ ।
तपाईंलाई थाहै छ, गर्भावस्थामा चिकित्सकले आयरन सेवन गर्नका लागि सुझाव दिन्छन् । कहिले काहीँ आइरन बढी हुँदा पनि पायल्सको समस्या हुनसक्छ ।
गर्भावस्थामा पाचनको समस्या हुन्छ, जसको कारण पनि यस्तो जटिलता थपिन सक्छ । शिशुको जन्मपछि पायल्स आफै ठिक हुनपनि सक्छ । कतिपय अवस्थामा भने पायल्स ठिक हुन बर्षदिन पनि लाग्न सक्छ ।
प्रसव व्यथा लागेको बेला
-दिसा अर्थात मलत्याग गर्दा रगत बग्नु
-मलद्वारमा दुख्नु, चिलाउनु ।
-पटक-पटक दिसा लागेजस्तै हुनु ।
गर्भावस्थामा पायल्सबाट कसरी बच्ने त ?
-यसका लागि शरीरमा पानीको मात्रा धेरै हुनुपर्छ । नियमित मात्रामा दिनमा १० गिलास जति पानी पिउने ।
-चिया वा क्याफिनको सेवन नगर्ने ।
-फाइबरयुक्त खानेकुरा सेवन गर्ने ।
-पर्याप्त मात्रामा फल र सब्जी खाने ।
-तरल वा झोलपदार्थ बढी सेवन गर्ने ।
-नियमित व्यायाम गर्ने ।
-जब दिसा लाग्छ, तब ट्वाइलेट जाने ।
-दिसा गर्दा जबरजस्ती वा बल नगर्ने ।
यी प्राकृतिक उपाय हुन् । यदि यी सबै विधी अपनाउँदा पनि कब्जियत भइरहेमा वा पायल्सको संभावना भएमा चिकित्सकको सल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
धेरै आराम पनि नगरौं
अक्सर महिलाहरु गर्भवती भएपछि आरम गर्छन् । गर्भको बच्चालाई केही होला कि भनेर शारीरिक रुपमा सक्रिय हुँदैनन् ।
Previousसगरमाथा आरोहणमा १९३ आरोही
Nextबारा र पर्सामा आएको ‘टोर्नाडो’को नेपाली नाम खोजिँदै
कुपोषणको उपचारका लागि बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने
५ मंसिर २०७३, आईतवार १०:१५
सुरक्षित महिनावारीका लागि #PeriodPower अभियान सुरु
२५ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार ०९:०४
७ जेष्ठ २०७४, आईतवार १९:०१
मेडिकल शिक्षाबाट निजी क्षेत्रलार्इ फेज आउट गर्न डा. केसीको प्रस्ताव
१९ माघ २०७३, बुधबार १७:२०